စပိန်ရှိ အကြီးဆုံးရင်ပြင်များ- Oriente မှ Fórum | ခရီးသွားသတင်း
လူးဝစ် Martinez | 12/05/2022 15:00 | Espana, လမ်းပြ
ကြုံလာတဲ့အခါ ပြောနေတာ စပိန်တွင်အကြီးဆုံးရင်ပြင်များကျွန်ုပ်တို့၏ပထမဆုံးသွေးဆောင်မှုမှာ ကျွန်ုပ်တို့နိုင်ငံကို လူနေထူထပ်စေသော မြောက်မြားစွာသော အဓိကရင်ပြင်များမှ ပြုလုပ်ရန်ဖြစ်သည်။ သို့သော် ၎င်းတို့သည် အကြီးဆုံးမဟုတ်သောကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့ အမှားလုပ်မိပါလိမ့်မည်။
တကယ်တော့ စပိန်မှာ ရှိတယ်။ အံ့သြဖွယ်ကောင်းသော အဓိကရင်ပြင်များ သမိုင်းကြောင်းတွေနဲ့ ပြည့်နှက်နေပါတယ်။ အားလုံးက အရမ်းလှပေမယ့် မင်းကို မီးမောင်းထိုးပြရမှာ တိုက်ဆိုင်မှုမရှိသော Salamanca သို့မဟုတ် မနည်းလှ၏။ မက်ဒရစ်. အလားတူ၊ နှိမ့်ချမှုပိုရှိသော၊ သာတူညီမျှ အဖိုးတန်သည့် အခြားသူများအကြောင်း ကျွန်ုပ်တို့ ပြောပြနိုင်သည် ချင်းချင် ၏လှိုင်း Almagro. သို့သော်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် စပိန်ရှိ အကြီးဆုံးရင်ပြင်များအကြောင်း သင့်အား ပြောပြလိုပြီး ၎င်းတို့အနက်မှ တစ်ခုမျှ ပါဝင်မည်မဟုတ်ပါ။ သူတို့ဟာ ငါတို့မင်းကိုပြမယ့်သူတွေပါ။
1 ဖိုရမ်စကွဲ (ဘာစီလိုနာ)၊
2 Colon Square (မက်ဒရစ်)
3 စပိန်ရင်ပြင် (မက်ဒရစ်)
4 စပိန်ရင်ပြင် (ဘာစီလိုနာ)
5 Plaza de Oriente (Madrid) သည် စပိန်ရှိ အကြီးဆုံးရင်ပြင်များထက် များစွာပိုသည်။
6 စပိန်ပလာဇာ (ဆီဗီးလ်)
7 Medina del Campo ၏ပလာဇာမြို့တော်ဝန်
ကျွန်ုပ်တို့၏ ခရီးစဉ်တွင် ဤအများပြည်သူဆိုင်ရာနေရာကိုလည်း မထည့်သွင်းသင့်ပေ။ ဖိုရမ်ပန်းခြံ. ၎င်းတွင် စတုရန်းမီတာ 160 ခန့်ရှိပြီး ဘာစီလိုနာကို San Adrián del Besós နှင့် ချိတ်ဆက်ထားသောကြောင့် တိုက်ဆိုင်မှုမဟုတ်ပါ။
၎င်းကို ၂၀၀၄ ခုနှစ်တွင် ဒီဇိုင်းဖြင့် ဖန်တီးခဲ့သည်။ ဧလိယ တောရက်စ် y ဟိုဆေးအန်တိုနီယိုMartínez ဌာနချုပ်အဖြစ် Universal Forum of Cultures ထိုနှစ်တွင် ကက်တလန်မြို့၌ ကျင်းပခဲ့သောကြောင့် ၎င်း၏အမည်မှာ ၎င်းအပြင် ၎င်း၏ အထင်ရှားဆုံး အဆောက်အအုံဖြစ်သည့် ဖိုရမ်၊ အလုပ် Jacques Herzog y Pierre deMeuron၊ ယနေ့ အိမ်၊ Barcelona ၏သဘာဝသိပ္ပံပြတိုက်.
အာကာသ၏ အဓိကဧရိယာကို ကြီးမားသော photovoltaic panel၊ Los Pajaritos ဟုခေါ်သော အချို့သော pergolas၊ ကော်လံသစ်တောနှင့် ရှိုးပွဲကျင်းပရန် ရှုခင်းသာနေရာများစွာတို့ လွှမ်းမိုးထားသည်။ သို့သော်၊ ထို့အပြင်၊ ၎င်းတွင်အခြားသေးငယ်သောနေရာနှစ်ခုရှိသည်။ Campo de la Bota ပန်းခြံနှင့် Auditoriums.
Colon Square (မက်ဒရစ်)
စပိန်ရှိ အကြီးဆုံးရင်ပြင်များထဲမှ အလှဆုံးဖြစ်သည့် Madrid ရှိ Plaza de Colón မြင်ကွင်း
ယခင်ပုံစံထက် သေးငယ်သော်လည်း ထပ်တူထပ်မျှ ကြီးကျယ်ခမ်းနားသည်မှာ ဤမက်ဒရစ်စတုရန်းမိုင် ၃၇၀၀၀ ကျယ်ဝန်းသည်။ ၎င်းသည် Goya နှင့် Génova လမ်းများ နှင့် Paseos de la Castellana နှင့် Recoletos တို့၏မြစ်ဆုံတွင် တည်ရှိသည်။
ဥယျာဉ်များနှင့် အထိမ်းအမှတ်နေရာတို့မှ ၎င်း၏အမည်ကို ရရှိသည်။ ခရစ်စတိုဖာကိုလံဘတ်စ် အဲဒါကို လွှမ်းမိုးထားတယ်။ ၎င်းသည် ဂေါ့သခ်လက်သစ်ပုံစံကို တုံ့ပြန်ပြီး XNUMX ရာစုအကုန်တွင် တည်ဆောက်ခဲ့သည်။ ရုပ်တုကိုယ်နှိုက်က လက်ရာဖြစ်သော်လည်း စုစုပေါင်းအမြင့် ဆယ့်ခုနစ်မီတာတွင် ထင်ရှားသည်။ Jeronimo Sunol အဖြူရောင် စကျင်ကျောက်ဖြင့် အတိုင်းအတာ သုံးခု။
ဖော်ပြထားတဲ့ အတိုင်းပါပဲ။ ရှာဖွေတွေ့ရှိမှုဥယျာဉ်၎င်းတို့အောက်တွင် ဗီလာဒီမာဒရစ်၏ ယဉ်ကျေးမှုစင်တာဟောင်း Fernán Gomez ပြဇာတ်ရုံ အနုပညာစင်တာဖြစ်သည်။ ၎င်း၏ မျက်နှာပြင်ပေါ်တွင် ရှိနေပြီး၊ အမေရိက၏ ရှာဖွေတွေ့ရှိမှုအတွက် အတိအကျ ရည်စူးထားသော အခြား အထိမ်းအမှတ် အဆောက်အအုံကို သင်တွေ့မြင်နိုင်ပါသည်။ Joaquin Vaquero Turcios. ထို့အပြင် ဧရိယာ ၂၉၄ စတုရန်းမီတာ ကျယ်ဝန်းသော ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံး စပိန်အလံကိုလည်း တိုင်ငါးဆယ်ပေါ်တွင် တင်ထားသည်။
နောက်ဆုံးအနေနဲ့ Génova လမ်းနဲ့ ရင်ပြင်ရဲ့ ထိပ်ဆုံမှာ ရှိနေတယ်။ ကိုလံဘတ်တာဝါများ ကျွန်းတစ်ကျွန်းပေါ်တွင် ကိုလံဘီယာနိုင်ငံသား ထုလုပ်ထားသည့် မှန်တစ်ချပ်နှင့် အမျိုးသမီးရုပ်တု၊ Ferdinand Botero.
Madrid ရှိ စပိန်ပလာဇာ
စတုရန်းမီတာ 36 ကျယ်ဝန်းသောကြောင့် ယခင်မြို့ဟောင်းသို့ ရောက်လုနီးပါးရှိသော စပိန်ရှိ အကြီးဆုံးရင်ပြင်များကို ပြသရန် ကျွန်ုပ်တို့နိုင်ငံ၏မြို့တော်ကို ချန်ထားခဲ့မည်မဟုတ်ပါ။ Gran Vía၊ Princesa၊ Bailén၊ Ferraz၊ Leganitos နှင့် Cuesta de San Vicente တို့သည် ၎င်းတွင် ဆုံစည်းရာလမ်းများဖြစ်သည်။
မြို့၏ အမှတ်အသား အဆောက်အအုံများစွာဖြင့် ဝန်းရံထားသည်။ ၎င်းသည် ကိစရိ၊ မက်ဒရစ်မျှော်စင်အမြင့်ပေ တစ်ရာ့လေးဆယ့်နှစ်မီတာရှိပြီး မြို့တော်ရှိ ပထမဆုံး မိုးမျှော်တိုက်များထဲမှ တစ်ခုဖြစ်ပြီး ၁၉၆၀ ပြည့်နှစ်တွင် တည်ဆောက်ခဲ့ကာ နောက်ပိုင်းတွင် ခမ်းနားထည်ဝါမှုလည်းရှိသည်။ Edficio EspañaGran Via ၏အဆုံးတွင်ဖြစ်သည်။
ဒါပေမယ့် အဲဒါတွေထက် လုပ်ဆောင်ချက်နည်းပြီး ရိုးရိုးသားသားပြောရရင် ပိုလှတယ်။ Gallardo အိမ်ခေတ်မီခြင်း၏ ရတနာဖြစ်သည်။ Federico Arias ဘုရင် 1914 တွင် ပြီးစီး၍ အဆောက်အဦးကို မမေ့သင့်ပါ။ Royal Asturian သတ္တုတူးဖော်ရေးကုမ္ပဏီ၁၉ ရာစုနှောင်းပိုင်းမှ ကြီးကျယ်ခမ်းနားသော Alfonsine သို့မဟုတ် eclectic စတိုင်၏ နောက်ထပ်အလှတရား။ နောက်ဆုံးအနေနဲ့ အထိမ်းအမှတ်တစ်ခု ပေးလိုက်တာ။ Miguel de Cervantes Plaza de España ကို ၎င်း၏ဗဟိုမှ လွှမ်းမိုးထားသည်။ ၏အလုပ်ဖြစ်ခဲ့သည်။ Rafael Martinez Zapatero နှင့် Lorenzo Coullaut Valera ၎င်းသည် Don Quixote နှင့် Sancho ၏ပုံအောက်တွင်ထိုင်နေသည့်စာရေးဆရာကိုကိုယ်စားပြုသည်။
စပိန်နိုင်ငံရှိ အကြီးဆုံးရင်ပြင်များဆီသို့ ကျွန်ုပ်တို့၏ ခရီးစဉ်ကို ဆက်လက်ပြီး ဘာစီလိုနာတွင်ရှိသော ယခင်နေရာများထဲမှ တူညီသည်။ 34 စတုရန်းမီတာတွင်၊ ၎င်းသည် အနည်းငယ်သေးငယ်သော်လည်း လှပခြင်းမရှိပါ။ ဗိသုကာပညာရှင်တွေက ဒီဇိုင်းထုတ်ခဲ့တာပါ။ Josep Puig နှင့် Cadafalch y Guillem Busquetsပြီးသွားတဲ့လူက တာဝန်ခံပေမယ့် အန်တိုနီ ဒါဒါ.
တို့အတွက် တည်ဆောက်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။ 1929 ခုနှစ် နိုင်ငံတကာ ပြပွဲ access အဖြစ် Montjuïcအဲဒီပြပွဲရဲ့ အဓိကနေရာပါ။ တကယ်တော့ အဲဒီခေတ်က ရှေးဟောင်း အမွေအနှစ်တွေကို အခုထိ ထိန်းသိမ်းထားဆဲပါ။ စပိန်ရွာ သို့မဟုတ် နွားသိုးဟောင်း၊ မုဒဲယာ လက်သစ်ရတနာ Augustus Font ယနေ့ခေတ်တွင် စျေးဝယ်စင်တာအဖြစ် ပြောင်းလဲခဲ့သည်။ Venetian တာဝါတိုင်များ de Ramon Raventos သို့မဟုတ် ဂျာမန်မဏ္ဍပ်၊ ခေတ်မီဗိသုကာလက်ရာများကြောင့် အံ့ဩစရာဖြစ်သည်။ Rohe der Mies van.
အလားတူပင် ရင်ပြင်၏ အလယ်ဗဟိုတွင် ဖန်တီးထားသည့် ကြီးကျယ်ခမ်းနားသော ရေတွင်းတစ်ခုလည်း ရှိနေသည်။ Jose Maria Jujol ပန်းပုဆရာများဖြင့် အလှဆင်ထားသည်။ မိုက်ကယ်ဘလေ y Miquel နှင့် Lucia Osle. ဂန္တဝင်လက္ခဏာများဖြင့်၊ ၎င်းသည် ၎င်း၏ပင်လယ်၊ မြစ်များနှင့် ထင်ရှားကျော်ကြားသော ဇာတ်ကောင်အချို့ကို ကိုယ်စားပြုသည့် စပိန်နိုင်ငံ၏ ပထဝီဝင်နှင့် သမိုင်းကို ကိုယ်စားပြုသည်။ ယေရှု၏စိန့်ထရီဇာ, ကက်သလစ် Isabel o Aragon မှ James I.
Plaza de Oriente (Madrid) သည် စပိန်ရှိ အကြီးဆုံးရင်ပြင်များထက် များစွာပိုသည်။
Plaza de Oriente ရှိ တော်ဝင်နန်းတော်
စပိန်မြို့တော်၏ဗဟိုတွင်တည်ရှိပြီး၎င်းသည်ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် 32 စတုရန်းမီတာရှိသည်။ ၎င်း၏ပုံသဏ္ဍာန်သည် စတုဂံပုံသဏ္ဍာန်ဖြစ်ပြီး ကွေးညွတ်သော headboard ဖြင့် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသည်။ Narciso Pascual နှင့် Colomer 1844 တွင်၊ ၎င်းသည် သင်ယခုအချိန်အထိ ကျွန်ုပ်တို့ပြသခဲ့သည့်အရာအားလုံး၏ အထင်ရှားဆုံးဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်သည်။
အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ၎င်း၏အနောက်ခြမ်းတွင် အထင်ကြီးလောက်စရာများဖြင့် ကန့်သတ်ထားသည်။ တော်ဝင်နန်းတော်အမိန့်ဖြင့်တည်ဆောက်ခဲ့သည်။ ဖိလိပ္ပုသည် V XNUMX ရာစုတွင် Alcázar ဟောင်း၏အကြွင်းအကျန်များ။ ထို့အတူ အရှေ့ဘက်၌လည်း ဘောင်ခတ်ထားသည်။ Teatro ရီးရဲလ်1850 ခုနှစ်တွင် ဖွင့်လှစ်ခဲ့သော အော်ပရာအတွက် Madrid Coliseum နှင့် မြောက်ဘက်တွင်၊ လူ့ဇာတိခံ ဘုရင့်ကျောင်းတိုက်မိဖုရားက တည်ထောင်ခဲ့သည်။ သြစတြီးယားမှ မာဂရက်XNUMX ရာစုတွင် Philip II ၏ဇနီး။
သို့သော်၊ ထို့အပြင် Plaza de Oriente သည် ၎င်း၏လှပသောဥယျာဉ်များအတွက် ထင်ရှားသည်။ ဖန်တီးထားတာတွေကိုတော့ မပြောလိုပါဘူး။ Francesco Sabatiရင်ပြင်တော်မှမဟုတ်ဘဲ နန်းတော်နှင့်သက်ဆိုင်သော စေတီတော်ကို ကြည့်ရှုရန် အကြံပြုအပ်ပါသည်။ ဗဟိုဥယျာဉ်များခန့်ညားထည်ဝါသောပြေစာ၊ Lepanto ၏ y Cabo Noval တွေပါ။၎င်းတို့အားလုံးသည် ၎င်းတို့၏ သက်ဆိုင်ရာ ပန်းပုအစီအစဥ်များဖြင့် ပြုလုပ်ကြသည်။
ယင်းတို့အနက်မှ ထုလုပ်ထားသည့် Philip IV ၏ ရုပ်ပွားတော်ကြီးကို ထင်ရှားစေသည်။ Pietro taccaVisigoth မှစပြီး Visigoth ကာလအထိ စပိန်ဘုရင်များ၏ ရုပ်ပွားတော်များဖြစ်သည်။ Leon မှ Ferdinand I. အလားတူ၊ Cabo Noval ၏ ဥယျာဉ်များတွင် ဤစစ်သား ဖန်တီးထားသည့် အထိမ်းအမှတ် အထိမ်းအမှတ်တစ်ခုကို သင်တွေ့နိုင်သည်။ Mariano benlliure Lepanto ၏နောက်ထပ် Captain Melgar ၏အလုပ် Julio Gonzalez Pola.
Seville ရှိ Plaza de España
ခံ့ညားထည်ဝါသော စတုရန်းပုံကြီးအတွက် ဖန်တီးထားသည်။ 1929 Ibero-American Exposition. ၎င်းသည် María Luisa ၏ Seville ပန်းခြံတွင်တည်ရှိပြီး ဗိသုကာပညာရှင်ကြောင့်ဖြစ်သည်။ AníbalGonzález31 စတုရန်းမီတာ ကျယ်ဝန်းသော ဘဲဥပုံတစ်ပိုင်း အာကာသကို မီတာတစ်ရာ့ခုနစ်ဆယ်ခန့်ရှိသော အံ့မခန်း အဆောက်အအုံဖြင့် ဘောင်ခတ်ဖန်တီးခဲ့သူဖြစ်သည်။
ဒီပုံစံ စပိန်နိုင်ငံသည် Ibero-အမေရိကန်နိုင်ငံများအတွက် ထွေးပွေ့ခြင်းကို ကိုယ်စားပြုသည်။. ၎င်းသည် New Continent သို့ရောက်ရှိရန်လမ်းကြောင်းအဖြစ် Guadalquivir မြစ်ကိုပင်ဖွင့်ထားသည်။ တံတားလေးစင်းဖြင့် ဖြတ်၍ ကီလိုမီတာ တစ်ဝက်ခန့်ရှိသော မြစ်ငယ်ဖြင့် ဘောင်ခတ်ထားသည်။
ပင်မဆောက်လုပ်မှုအနေဖြင့်၊ ၎င်းသည်ဂန္ထဝင်စတိုင်ကိုတုံ့ပြန်သည်။ palladian ဗီလာ. ၎င်း၏မျက်နှာစာတွင် ကြီးကျယ်ခမ်းနားသော ကြွေထည်အလှဆင်ခြင်းနှင့် arches များဖြင့်ပံ့ပိုးထားသောပြခန်းများရှိသည်။ နောက်ပိုင်းတွင် သစ်သားဖြင့်ပြုလုပ်ထားသော မျက်နှာကျက်များဖြင့် လှပစွာအလှဆင်ထားသော မျက်နှာကျက်များလည်းရှိသည်။ နောက်ဆုံးတွင်၊ အဆောက်အဦး၏အဆုံးတွင် Navarra နှင့် Aragón တံခါးနှစ်ပေါက်ပါရှိသော်လည်း အမြင့် ခုနစ်ဆယ့်လေးမီတာမြင့်သော ကြီးကျယ်ခမ်းနားသော ခန့်ညားထည်ဝါသောတာဝါတိုင်နှစ်ခုကို မြှင့်တင်ထားသည်။
အခြားတစ်ဖက်တွင်၊ ရင်ပြင်တွင် အလယ်ဗဟိုတွင် ရေတွင်းတစ်ခုရှိသည်။ ဗင်းဆင့်ထရာဗာ နှင့် လေးဆယ့်ရှစ်ဘဏ် ကျွန်းဆွယ်ပြည်နယ် လေးဆယ့်ခြောက်ခုနှင့် Canary နှင့် Balearic ကျွန်းစုများကို ကိုယ်စားပြုသည်။ ၎င်းတို့ကို အက္ခရာစဉ်အလိုက် စီစဉ်ထားပြီး ခုံတန်းလျားတစ်ခုစီတွင် ၎င်း၏လက်နက်အင်္ကျီ၊ ၎င်း၏မြေပုံနှင့် ၎င်း၏သမိုင်းမှ ဆက်စပ်ဖြစ်ရပ်အချို့ပါသည့် Pisan အကွက်တစ်ခု ပေါ်လာသည်။
Medina del Campo ၏ပလာဇာမြို့တော်ဝန်
Medina del Campo ၏ Plaza မြို့တော်ဝန်ရှိ San Antolín ၏ Collegiate Church
ကျွန်ုပ်တို့သည် အတိုင်းအတာများအကြောင်းပြောပါက၊ စပိန်ရှိ အကြီးဆုံးရင်ပြင်များကြားတွင် ဤနေရာကို သိမ်းပိုက်ရန် Medina del Campo ရှိ ဤနေရာအတွက် ဖြစ်မည်မဟုတ်ပေ။ သို့သော် ကျွန်ုပ်တို့သည် ဧရိယာ ၁၄၀၀၀ စတုရန်းမီတာနှင့် ကျွန်ုပ်တို့နိုင်ငံရှိ အကြီးဆုံးများထဲတွင် အကြီးဆုံးဖြစ်သောကြောင့် ၎င်းကို ထည့်သွင်းလိုသည်မှာ ဥပမာ၊ Salamanca သို့မဟုတ် Madrid တို့ထက် သာလွန်ပါသည်။
သူမသည်လူသိများသည်။ ပလာဇာမြို့တော်ဝန် de la Hispanidad. ပြီးတော့ ကြီးကျယ်ခမ်းနားတဲ့တန်ဖိုးနဲ့ ပတ်သက်လာရင် အရင်သူတွေကို မနာလိုမဖြစ်ပါဘူး။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ၎င်းကို အဆောက်အအုံများကဲ့သို့ ဘောင်ခတ်ထားသည်။ မြို့အမှုအရေးဆောင်ရွက်ရာအဆောက်အဉီ နှင့် Arcos နှင့် Peso အိမ်များအားလုံးက ၁၇ ရာစုကပါ။ ဒါပေမယ့်လည်း တော်ဝင်နန်းတော်အဆိုပါ San Jose နှင့် Santa María Magdalena ၏ကွန်ဗင့်များ သို့မဟုတ် San Antolin ၏ကောလိပ်ဘုရားကျောင်း.
စူးစမ်းလိုစိတ်အနေဖြင့်၊ ၎င်းတို့၏ပစ္စည်းများရောင်းချရန်အတွက် guild များအလိုက် Foal၊ Spices၊ လက်ဝတ်ရတနာများ သို့မဟုတ် လက်နက်တိုက်စသည့် အမျိုးမျိုးသောလမ်းစင်္ကြံများသည် ၎င်းတို့၏ပစ္စည်းများကိုရောင်းချရန်အတွက် ၎င်းတို့တွင်အခြေချနေထိုင်ကြသော guilds များကဲ့သို့ နာမည်များပေးထားကြောင်း စူးစမ်းလိုစိတ်ဖြင့် သင့်အား ပြောပြပါမည်။ လက်ရှိပုံစံသည် နောက်ပိုင်းတွင်ဖြစ်သော်ငြား ၎င်း၏ဇာစ်မြစ်သည် ဆယ့်သုံးရာစုမှဖြစ်သည်။ မည်သို့ပင်ဆိုစေ၊ Medina del Campo ၏ပလာဇာမြို့တော်ဝန်သည်ကျွန်ုပ်တို့နိုင်ငံတွင်အသက်အကြီးဆုံးဖြစ်သည်။
နိဂုံးချုပ်အားဖြင့်၊ ငါတို့သည်သင်တို့ကိုပြသခဲ့ပြီးဖြစ်သည်။ စပိန်တွင်အကြီးဆုံးရင်ပြင်များ. မလွှဲမရှောင်သာ၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် အခြားသူများကဲ့သို့ ချန်ထားခဲ့သည်။ Zaragoza ၏တိုင်24 စတုရန်းမီတာ၊ Pamplona ရှိရဲတိုက် 14 သို့မဟုတ် သင့်ကိုယ်ပိုင် ပလာဇာမြို့တော်ဝန် မက်ဒရစ်12 ကျော်ဖြင့် ဤနေရာများသည် အထင်ကြီးလောက်ဖွယ်ကောင်းသည်ဟု သင်မထင်ဘူးလား။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - ခရီးသွားသတင်း » Getaways ဥရောပ » Espana » စပိန်တွင် အကြီးဆုံးရင်ပြင်များ
တစ်နေ့တွင် Seville တွင်မြင်ရမည့်အရာ